စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ - ငွေသား Drop 200 x ကို£ 10 Gypsy မွန်းအဓိကအကြောင်းအရာ
စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ – ငွေသား Drop 200 x ကို£ 10 Gypsy မွန်းအဓိကအကြောင်းအရာ
200 £ 10 ဆု 12pm ကြာသပတေးနေ့ 16 ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာအနိုင်ရအကောင့်သို့နေရာချပါလိမ့်မည် 2017 (BST) နှင့် giveaway ရဲ့ start အထိမ်းအမှတ်လိမ့်မည်.
ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ACST ၏ညီမျှသည် -9.30hrs, ဒီနည်းကို -1hr, PTZ + 8hrsCash ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 22 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ် 12pm အားဖြင့်အခိုင်အမာရဦးမည် 2017 (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) ဆုကြေးငွေကရက်ဒစ်၏အားလုံးသို့မဟုတ်အချို့ကိုရွေးနှုတ်အားဖြင့်.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 12pm အားဖြင့်ဆိုပါက (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) 22ကြိမ်မြောက်, အချီးမြှင့်အကောင့်အွန်လိုင်းမှဂိမ်းအပေါ် wagered ကြပြီမဟုတ်, အလောင်းကစားရုံအားဆုချီးမြှင့်ရုပ်သိမ်းပေးရန်နှင့်ပြန်လည်ချီးမြှင့်ဖို့အခွင့်ရှိပါတယ်.
အဆိုပါဆုဖြစ်လိမ့်မည် 200 £ 10 ဆုအတွက်ငွေသားချီးမြှင့်၏နေသည်ဟုသူ. ဒီအကြွေးဖြောင့်ကွယ်ပျောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါမြှင့်တင်ရေး 12pm မှာငြိမ်းလိမ့်မည် (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 22 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ် 2017 အ Nektan networkTo entry ကိုများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီဖြတ်ပြီးငွေသားဆုများကမြှင့်တင်ရေးအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဘယ်မှာစည်းကမ်းချက်များခဲ့ယုံကြည်သည်ဆိုပါက 1st မတ်လ 2016.The လောင်းကစားရုံဆိုပရိုမိုးရှင်းပေးချေမှုမပြောဘဲရန်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကတည်းကကစားသမားသူတို့၏အကောင့်သို့ logged ရပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြလိမ့်မည် ကမ်းလှမ်းမှုကို၏မပြည့်စုံကြသည်မဟုတ်.
ငွေ Drop ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
Glastonbury ငွေ Drop ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & Conditions Trustly Prize Draw